ဗုဒ္ဓ ဒဿန | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
ဗုဒ္ဓ ဒဿန	# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၄)Published January 24, 2010 | By dr.tin bo bo	ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာကို ရေးလာတာ ဘာလိုလိုနဲ့ အပိုင်း(၄)ကို ရောက်လာပါပြီ။ ဖတ်တဲ့လူတွေတော့ ငြီးငွေ့နေကြပြီလား မသိပါဘူး။ တစ်ချို့တွေ ငြီးငွေ့ကောင်း ငြီးငွေ့နိုင်ပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ အလွန် စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော် ဖတ်ရှု နေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းလေးကတော့ အပိုင်း (၃)မှာ မပြောလိုက်ရတဲ့ “ဣသာမစ္ဆရိယ” အကြောင်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged Best Life Style, ဗုဒ္ဓ ဒဿန, ဘ၀ ဒဿန, ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ, ဘ၀အတွက်အကောင်းဆုံး ယတြာ . . အပိုင်း (၄), အတွေးအမြင် | 44 Comments	# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၃)Published January 16, 2010 | By dr.tin bo bo	ပြီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးအပိုင်း(၂)ကို စိတ်ပါလက်ပါ ၀င်ရောက်အားပေး ဖတ်ရှုကြပြီး အူလှိုက်သဲလှိုက် အားပေးသွားကြတဲ့ စာဖတ်သူများကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စေတနာ ထိရောက်မှုအတွက် အလွန်ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်။ သဘောမတူသူများ ရှိနိုင်ပေမယ့် ဒီလောက်လူဦးရေမျှ သဘောတူ လက်ခံတယ်ဆိုရင်ဘဲ ၀မ်းမြောက်လှပါပြီ။ စိတ်ကူးတဲ့ရာ လျှောက်ရေးတာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ရင်းပြီး ရေးထားခြင်း ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ အားလုံးကို နားလည်စေချင် ပါတယ်။ အများအတွက် အကျိုးမရှိတဲ့ စာသားများကို ရေးပြီး အချိန်မဖြုန်းလိုပါ။ တကယ် အကျိုးရှိတာ ဧကန်မုချမို့ တကယ် ယုံကြည်အောင် ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် အားထုတ်ပြီး ရေးပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူ အတော်များများက လက်မခံဘူး ဆိုရင်တော့ အကြောင်းအရာက မမှန်လို့ မဟုတ်ဘဲ မိမိရဲ့ တင်ပြပုံ ညံ့ဖျင်းမှု ကြောင့်သာလျှင် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျား။
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged Best Life Style, ဗုဒ္ဓ ဒဿန, ဘ၀ ဒဿန, ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ, ဘ၀အတွက်အကောင်းဆုံး ယတြာ . . အပိုင်း (၄), အတွေးအမြင် | 53 Comments	# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၁)Published January 1, 2010 | By dr.tin bo bo	စာရေးသူရဲ့ ဗေဒင်လေ့လာမှု သက်တမ်းအနှစ် (၃၀)အတွင်းမှာ စိတ်ဝင်စားမှု အနည်းဆုံး ဘာသာရပ်ကတော့ “ယတြာ” ပညာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗေဒင်ပညာကို “မ.ထ.သ” “လိုင်းပေါင်းစုံ” လို့ ခေါ်ရ လောက်အောင် အကုန် လျှောက်ပြီး လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ လက္ခဏာ၊ သင်္ချာဗေဒ၊ အရှေ့တိုင်း လက်ရိုး နက္ခတ်၊ အနောက်တိုင်းနက္ခတ်၊ K.P ဟူးရား၊ မဟာဘုတ်၊ သုံးတန်ပေါ်နိစ်၊ ဆန်း၊ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ၊ အယူတော်မင်္ဂလာ၊ အာယုစန်း၊ သရောဒယ၊ တားရော့ . . . ရှိရှိသမျှ အားလုံးကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ကြွားပြောတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ လိုင်းပေါင်းစုံတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြတာပါ။ ဒီလို လိုင်းပေါင်းစုံတာလည်း တကယ်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ဘယ်ပညာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တီးမိခေါက်မိ ရှိချင်လို့ပါ။ အကုန်လုံး တော့လည်း မကျွမ်းကျင် ပါဘူး။
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged Best Life Style, ဗုဒ္ဓ ဒဿန, ဘ၀ ဒဿန, ဘ၀အတွက်အကောင်းဆုံး ယတြာ . . အပိုင်း (၄), အတွေးအမြင် | 21 Comments	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,868)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,993)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,916)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,416)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,470)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,597)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,626)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,989)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,318)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,277)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,112)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,057)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,855)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,818)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,305)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,144)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,835)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,510)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,197)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,186)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,830)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,686)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,682)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,555)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,270)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,254)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,921)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,711)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,482)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,033)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !